Mpanamboatra sy mpamatsy Cliff Pet | China Pet Nail Clippers Factory
Gunting ho an'ny biby fiompy ho an'ny alika lehibe
1. Ny hety hoho ho an'ny alika lehibe dia mahagaga fa mora ampiasaina, madio sy marina ny fanapahana, ary manapaka mahitsy amin'ny tsindry kely izy ireo.
2. Ny lelany amin'ity clipper ity dia afaka 't miondrika, mikorisa na harafesina, ary hijanona maranitra aorian'ny fikolokoloana maromaro, na dia mihombo aza ny alikanao. Ny hety hoho biby fiompy ho an'ny alika lehibe dia manana kofehy vy tsy misy fatrany mavesatra indrindra, izay hanome traikefa fanapahana maranitra mahery sy maharitra.
3. Mahafinaritra ny mitazona ireo tanany tsy slip. Manakana ny hety hoho biby fiompy ho an'ny alika lehibe misidina.
Clip Nail Pet sy ny fanapahana
1.Pet Clip Nail Clip sy Trimmer miaraka amina rafitra fametahana lozisialy feno lohataona ho an'ny hetsika fanapahana mahomby kokoa.
2. Ny hidin-trano fiarovana, manaova clipper fantsika biby fiompy sy trimmer amin'ny fanjakana mihidy rehefa tsy ampiasaina.
3. Ny fihazonana ergonomika dia natao hamolavolana ergonomika manodidina ny tananao ho fampiononana lava sy fanamorana ny fampiasana manampy amin'ny fisorohana ny fahatapahana hoho tsy nahy. Tazomy fotsiny ny mahazatra azy ireo rehefa mampihatra tsindry ianao.
4.Raha tsy ampiasaina izy ireo, ny Pet Nail Clipper sy ny Trimmer dia azohidiana miaraka amin'ny lelany amin'ny toerana mihidy. Tsy manapaka tsy nahy ny tenanao ianao rehefa manaisotra azy amin'ny vatasarihana.